Ma Doonaysaa In Uu Jacaylkaagu Waligiis Jiro Oo Aad Is Jeclaataan Inta Aad Adduunka Joogtaan, 8-dan Sir Ayaa Ku Caawin karta. – Allsomali.net | BANAADIRSOM
Home Arimaha Bulshada Ma Doonaysaa In Uu Jacaylkaagu Waligiis Jiro Oo Aad Is Jeclaataan Inta...
Ma aqaano sababta aan ula yaabno marka aan aragno lamaane ku jira da’dooda 60 jirada laakiin jacaylkooda u muujinaya sidii ay ku jiraan bilowgii xidhiidhkooda guurka, waxa aan dareenaa in ay tahay arin la yaab leh inkasta oo ay waajib tahay in ay sidaasi dhacdo.
Hadaba labada qof ee is jecel ee isla weynaaday miyaa haya sirta jacaylka waara? ma waxa ay leeyihiin sixir ka caawiyay in ay ilaashadaan jacaylkooda? ma waxa ay haystaan fure ka caawiyay in ay muddo dheer xejistaan jacaylkooda?.
Xaqiiqda ayaa ah ma ahan dhamaan inta kor ku xusan laakiin kalgacal ay xafidaan waxana aan halkan ku soo bandhigi doonaa sirta jacaylka mudada dheer socda.
in la is qadariyo; Wax kasta oo lammaanuhu sameeyo waa wax aan la dhayalsan karin; Qaddarinta macnaheedu waa inaad ixtiraamto lammaanahaaga, waxyaabaha uu jecelyahay, waxyaabaha uu neceb yahay, Waxay macno badan u yeelan doontaa lamaanahaaga qaddarintaasina waxay kordhin doontaa jacaylka qalbigooda ku jira!
micnaheedu maahan inaad joojiso xiriirka aad la leedahay qofka aad jeceshahay; Waa inaadan waligaa xasuusatid, kalmada ugu dambeeya carabkaaga adiga oo la jooga lammaanahaaga, Maxaad u joojinaysaa xiriirka aad la leedahay lammaanahaaga khilaaf kasta oo jira maadama aad ku soo laabanaysid? arintaas marna ma fiicna in lagu dhaqmo, waa in aad l socotaa in kala taggu u xun yahay labadiinaba waliba uuna xal u ahayn dhibaatada jirta sidaas darteed isku daya in aan ka wadahadashiin dhibaatada jirta idinka oo adeegsanaya xikmad.
3.Naf Hurid: –
Waxaa lawada ogyahay inaysan jirin laba qof oo wax walba isku raacsan, hadii ay tahay riyooyinka ama ujeedooyinka Nolosha, sidaas darteed waxa iman doona wakti ay tahay in aad labadiina qofka samaysaan naf hurid si aad uu u sii xoogaysto jacaylkiinu muddo dheerna u sii socda, sidaas darteed naf hurista ayaa ka mid ah furaha jacaylka mudada dheer socda.
Inkasta oo naf-hurida Guurka iyo jacaylku waajib tahay haddana mararka qaarkood waa inaad daacad ka ahaataa waxyaabaha aad jeceshahay iyo waxa aad neceb tahay; Sababtoo ah taasi waxay kaa badbaadin doontaa dhibaato badan, Waxa laga yaabaa in waxa aad naftaada ku qasbayso muhiim u tahay lamaanahaaga inkasta oo ayna muhiim ahayn, kala hadal lamaanahaaga waxyaabaha aadan jeclayn si aad labadiinaba xal ugu heshaan.
5.Ereyga wanaagsan: –
Ereyga naxariista leh, gaar ahaan erayga “Waan ku jeclahay,” wuxuu ku leeyahay saameyn soo jiidasho leh xiriirka lamaanaha; Kaliya ma dheereyso nolosha jacaylka, laakiin waxay cusbooneysiisaa qalbiga labada lamaane markasta; Waa erayga keliya ee aan luminaynin macaanka si kasta oo ay labada qof isugu xanaaqsanyihiin sidaas mar walba ereyga wanaagsan u adeegso lamaanahaaga.
6.Ka fogow khilaaf iyo muranka: –
markii aad iska ilaalin karto dagaal; Ka fogow… Ka fikir mar inaad ka aamusto dagaalladaada mid ka mid ah; Ka fikir inaad lammaanahaaga kula heshiiso eray macaan ama dhunkasho jilicsan, ka fogow khilaafka adiga oo tixgelinaya in jacaylkaagu ka weyn yahay kana xoog badanyahay khilaaf kasta oo idin soo dhex gala.
7.Taageerada Wakhtiga Xanuunka: –
Illahay idinkuma keeno, laakiin hadii uu midkiin xanuunasado waxa fiican in aad is daryeeshaan oo uu midkiinba taageero midka kale ee xanuunsanaya, arintan waxa ay xoojinaysaa jacaylka idinka dhexeeya sidoo kale waxa uu jacaylkiinu jiri doonaan muddo aad u dheer.
8.Jecel qoyska lamaanaha: –
La xiriir qoyska lammaanahaaga una jeclaw sidaad u jeceshahay waalidkaa oo kale; Markasta oo uu sii xoogeysto xiriirka aad la leedahay qoyska lammaanahaaga, waxa aad ku sii dhawaan doontaa qalbiga lamaanahaaga.
Previous articleLiverpool Oo Guuldaro Ku Soo Dhawaysay Van Dijk & Gomez, Hertha Berlin Ayaa Garaacday – banaadirsom